မင်းလက်ခံမှာလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မင်းလက်ခံမှာလား
Posted by breeze on May 11, 2010 in Drama, Essays.. |3comments
forward mail ကရတာလေးပါ။သူငယ်ချင်းတို့အတွက်မျှဝေပါရစေ။ပိုင်ရှင်သူငယ်ချင်းလည်းစိတ်မဆိုးလောက်ပါဘူး။
တစ်နေ့မှာတော့ ကောင်မလေးအတွက် မျက်စိတစ်စုံလုံး လှူမဲ့ အလှူရှင် ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်… အဲဒီအလှူရှင်ရဲ့ မျက်လုံးကို ကောင်မလေး မျက်အိမ်ထဲ ခွဲစိတ်ကုသမှုနဲ့ ထည့်သွင်းပြီးနောက် ပတ်တီးဖြေလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ သူမ အရာရာ အားလုံးကို မြင်တွေ့နိုင်ပါပြီ.. သူမရဲ့ ချစ်သူ ကောင်လေးကိုပါ ဘေးမှာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်.. သို့သော်လည်း ကောင်လေးဟာ မျက်စိမမြင် တဲ့သူ ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက် ရပါတယ်…. သူချစ်တဲ့ကောင်လေးဟာ မျက်စိမမြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ေ
နလိမ့်မယ်လို့ သူမ လုံးဝကို မထင်မှတ်ခဲ့ပါဘူး.. ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို “နင်အခု မျက်စိမြင်ပြီ ဖြစ်လို့ ငါ့ကို လက် ထပ်နိုင်ပြီလား ” လို့ မေးတဲ့အခါ ကောင်မလေးက “မျက်စိမမြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုလုပ် တစ်သက်လုံး အတွက် အားကိုးဖို့ ဖြစ်နိုင်မလဲ လက်မထပ်နိုင်ပါဘူး” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်..
breeze has written3post in this Website..
View all posts by breeze →
ကျွန်တော်တို့ညစာ စားပြီးအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ စာလောင်မှုနဲ့ အိပ်ရာဝင်ရတဲ့သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေရှိနေတုန်းပါ
ရောင်ရဲ တင်းတိမ်မှု က နေရာ တိုင်းမှာ မထားသင့်ဘူးထင်ပါတယ်…ကိုယ် ထက် နိမ့် ပါး မှုတွေ က စိဖြေရုံသက်သက်ပါ။။
ယနေ. အောင်မြင်တိုးတက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဟာ ရင်လောက်မှန်းမှ ဒူးလောက် ဆိုတဲ့ စကားပုံလို အမြင်ကို မှန်းဆရင်းကြိုးစားလာကြလိုပါ ….ကိုယ်ချင်းစာတရားဟာ လူတိုင်းမှာ ရှိသင်.ပါတယ် …တဦးနဲ.တဥိး ကိုယ်ချင်းစာ တရားတွေ ကြင်နာဖေးမမှုတွေ ၊ရှိနေရင် ကမ္ဘာကြီး ဟာ ပိုမို ငြိမ်းချမ်းလှပလာမှာပါ….
အခုနောက်ပိုင်းစေတနာနဲ့ မတန်တဲ့ လူတွေပိုပြီးများလာပါပြီ ။ ကိုယ်ကသာ စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ အနစ်နာခံပြီး ကိုယ်တတ်စွမ်းသမျှ အင်တိုက်အားတိုက်အလုပ်လုပ်ပေးပေမဲ့ အလုပ်ရှင်တွေဘက်က တုံ့ပြန်မှုကတော့ တလွဲစီပါပဲ ။ ဒါကြောင့်ပုံပြင်ထဲက ကောင်လေးလောက်သဘောကောင်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလေ။